I-China Grow Light Kits Gqibezela iHydroponics Greenhouse Planting System umzi-mveliso kunye nababoneleli | Virex
Khulisa iikhithi zokuKhanya Gqibezela iHydroponics Greenhouse Planting System
I-VIREX Khulisa iikhithi zokukhanya ezibandakanya ukukhula kwentente, ukukhanya okukhokelwayo, i-inline duct fan, i-carbon filter, i-aluminium foil ityhubhu kunye ne-hose hose yentsimbi.
I-VIREX ikhulisa iikhithi zokukhanya zinokukhanya okupheleleyo okubonakalayo okufanelekileyo kuzo zonke izigaba zokukhula; Ukutshintsha ukukhanya okulungelelanisiweyo ukulungisa ukukhanya kokukhanya; Iingubo ezikhuselayo kwii-leds zinceda ukwandisa ubomi benkonzo; Akukho fan, akukho ngxolo. Oku kukhanya kunika ukukhanya okunamandla kunye nokungena okufanayo kwe-canopy, okukhokelela kwisivuno esiphezulu.
Intente yokutyala emabhodloka: Ingaphakathi le-mylar elibonakalayo liyandisa indima yesibane sokutyala; Umsebenzi onzima we600D Oxford ujonge ukonyuka kokuqina; I-zipper ethembekileyo ivala kakuhle; I-suture yenaliti ephindwe kabini, amandla aphezulu, ukukhusela ukukhanya; Isakhiwo esomeleleyo, isakhelo esomeleleyo sentsimbi; Iifeni ezaneleyo / iifestile / ukuvuleka kweengcingo; Ukujonga isikrini segridi enokucocwa ukujonga kunye nokususa ukufuma; Itreyi esezantsi inqanda ukuvuza komgangatho kwaye igcina intente icocekile.
Inkqubo yokungenisa umoya enamandla: abalandeli abanokuthula nabanamandla kunye nokudibanisa kweefilitha zekhabhoni kunye nemibhobho ye-aluminium eguquguqukayo; Kulula kakhulu ukuyifaka kunye nokusetyenziswa; Ukubonelela ngomoya owomeleleyo kunye nokujikeleza komoya okufanelekileyo.
Imali kunye nokugcina amandla okuGqibela iiKhithi zeentente zokuTyala: Ukuthelekisa iindleko zezinto zomntu ngamnye kwiindleko zentente yethu yokutyala iphakheji epheleleyo, iikiti zonga imali kunye nexesha elininzi kunokuthenga into nganye ngokwahlukeneyo. Uyilo olusebenziseka lula, kulula ukuhlanganisa nokusebenza, nakubaqalayo.
Zonke iindawo zihambelana kwaye zihambelana ngokufanelekileyo. Thenga ngokuzithemba kwaye ugcine umgangatho: Ukuthenga izixhobo zokukhula ezikumgangatho ophezulu kuthetha ukuba uya kufumana ixabiso elingakumbi ixesha elide. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi nge-imeyile. Sizimisele ukubonelela ngenkxaso yenkonzo yabathengi ebalaseleyo phambi nasemva kokuthenga.
Khulisa izixhobo zokukhanya eziquka:
1.Khulisa intente :600D ilaphu oxford kunye nangaphezulu kwe 95% ebonakalisa imylar.
2. Ukukhanya kweLed: uyilo lolawulo olukrelekrele kunye ne-Dimming knob.
I-3.Inline duct fan: Ngeprobe kunye nesikrini sokubonisa, isantya somoya esilungelelanisiweyo, ukufuma, ubushushu kunye nexesha.
I-4.Isihluzi seCarcon: Umgangatho ophezulu we-Australian Virgin Activated Carbon kunye neFlange Refined aluminium Isusa ngokufanelekileyo i-99.5% yevumba.
5.Ityhubhu ye-Aluminiyam ye-foil:I-scalable, i-ductility elungileyo
Igama lemveliso VIREX Khulisa iikhithi zokukhanya
Uhlobo Indoor Garden Greenhouse
4Intshi kunye ne-intshi ezi-6
Iseti ibandakanya Isibane, isihluzi, ireflector, i-ballast, iduct, iihupu
Sebenzisa indawo Intente yokuKhula
Ngaphambili: Uyilo olutsha lokuKhulisa ibhegi eFanelekileyo iSebenzisa imifuno etyaliweyo
Okulandelayo: I-90CM * 6 iLayers Dry Net Detachable ngeHanger Ourdoor Drying
Khulisa iiKits zokukhanya 4/6 Intshi 600 Watt HPS Isibane sesibane...